Shiinaha COVID-19 (SARS-CoV-2) Warshad tijaabada Antigen iyo alaab-qeybiyeyaal | Kibir
Qalabkani wuxuu u adeegsanayaa tallaalka baaritaanka jirka. Qalabka tijaabada wuxuu ka kooban yahay: 1) midab burgundy conjugate pad ah oo ay kujiraan jiir anti-novel coronavirus nucleoprotein monoclonal antibody oo lagu xiray dahabka kolloidal, 2) xuubka xuubka itrocellulose oo ay kujiraan hal xariiq oo tijaabooyin ah (T xariiqyo) iyo khad xakameyn ah (C line). Qadka T-ga ayaa horay loogu sii duubay antibodies-ka si loo ogaado unugyada loo yaqaan 'coronavirus nucleoprotein', iyo khadka C-ka ayaa horay loogu sii daayay antibody-ka xariiqda koontaroolka.
Si ka Fudud: Looma baahna qalab gaar ah; Si fudud loo isticmaalo; Fasiraadda muuqaalka dareenka leh.
Degdeg ah: Natiijooyinka 10 daqiiqo.
Sax: Natiijooyinka waxaa lagu ansaxiyay PCR iyo ogaanshaha cudurka.
Kala duwanaanta: Waxay la shaqeysaa suufka loo yaqaan 'oropharyngeal swab', suufka sanka iyo nasopharyngeal swab.
1.Qafisyada foornada si shaqsi ah loo xiray oo ay ku jiraan:
a. Hal qalab
1) Novel coronavirus monoclonal antibody iyo bakayle IgG antibody for Recombined pad
2) Novel coronavirus monoclonal antibody oo loogu talagalay khadka T
3) anti-bakayle IgG antibody for line C
b. Mid qalajiya
1) Tubooyinka Muunada (20): Kaydinta Muunada （0.3ml / dhalo)
3) Tilmaamaha Tixraaca Degdegga ah (1)
Ku keydi 2 ℃ ~ 30 ℃ meel qalalan oo ka fogow qorraxda tooska ah. Ha barafoobin. Waxay shaqeyneysaa 24 bilood laga bilaabo taariikhda waxsoosaarka.
Ka dib markii bacda aluminiumka aan la daboolin, kaarka tijaabada waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo isticmaalo hal saac gudahood.
Magaca badeecada COVID-19 (SARS-CoV-2) Qalabka Baaritaanka Degdegga ah ee Antigen
Magaca Sumadda WAQTIGA DAHABKA
Habka Dahab isku dhafan
Muunad Suufka sanka, suufka oropharyngeal ama suufka nasopharyngeal
Dareenka caafimaad 96.330%
Cilmiga caafimaadka 99.569%
Heshiis guud 98.79%
Xirxirida 1/5/20 imtixaannada / kartoonka, Sida ku cad shuruudaha macaamiisha.
Waqtiga akhriska 10 daqiiqo
Taageero adeeg OEM / ODM
Xiga: COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG IgM Antibody Test
1.Fadlan si taxaddar leh u aqri buuga tilmaanta kahor imtixaanka.
2.Kaarto cajaladda tijaabada ah, keydka tijaabada ah ee tijaabada ah, iwm, oo isticmaal ka dib markaad ku noqoto heerkulka qolka. Markay wax waliba diyaar yihiin, jeex jeebka aluminiumka aluminiumka ah, ka soo qaad cajaladda tijaabada oo ku dheji masraxa.Markaad furto bacda aluminiumka, cajaladda tijaabada waa in sida ugu dhakhsaha badan loogu isticmaalo 1 saac gudahood.
3.Ku dheji balastarka / sheybaarka tubbada, kudar 1 dhibic (qiyaastii 20ul) oo muunad ah muunada ceelka tijaabada.kadibna fur dhalada dhibicda keydka ee khafiifka ah, ku dar 2 dhibcood (qiyaastii 80ul) oo ah khashinka tijaabada keyd ugu jira ceelka.
4. Waqtiga fiirinta: qiimee natiijada 15 daqiiqo ka dib muunad ku darista, ha ilaalin natiijada 20 daqiiqo kadib.
Positive: Kaliya khadka kontroolka tayada (C line) wuxuu leeyahay khad cas, khadka khadadka tijaabada (T line) ma leh xariiq casaan ah. Waxay muujineysaa jiritaanka SARS-CoV-2 difaaca jirka ee kahooseeya xadka ogaanshaha xirmada tijaabada ee tijaabada.
Tilmaam: Khadadka casaanka ah waxay ka muuqdaan khadka kontroolka tayada (C line) iyo khadka tijaabada (T line). Waxay ka dhigan tahay inaysan jirin SARS-CoV-2 dhexdhexaadinta unugyada difaaca jirka ee shaybaarka ama SARS-CoV-2 dhexdhexaadinta heerarka unugyada difaaca jirka oo ka hooseeya heerka ogaanshaha.
Aan ansax ahayn: Khad cas oo ka muuqda khadka xakamaynta tayada (C line), oo tilmaamaya guuldarro. Waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay hawlgal aan habboonayn ama cajalad tijaabo ah oo aan ansax ahayn waana in dib loo tijaabiyo